पानी धेरै पिउँदा झनै खतरा! बच्चालाई नि? :: PahiloPost
'शरीरमा पानी भएन भने के होला ?'
केक मेडिसिन अफ युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका ५ सय भन्दा बढी डक्टरहरु भन्छन्, 'शरीरमा बोसोको मात्रा बढ्ने, पाचन क्रिया कमजोर हुने, शरीरमा विषाक्तता बढ्ने, जोर्नी र मांसपेशीमा पीडा हुने समस्या निम्तन्छन्।'
पानी धेरै पिउँदा झनै खतरा! बच्चालाई नि? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।